Shadow and Bone's Calahan Skogman အသက်၊ Instagram၊ အမြင့်၊ အခန်းကဏ္။ - အရိပ်နှင့်အရိုး
အရိပ်နှင့်အရိုးရဲ့ Calahan Skogman အသက်, Instagram ကို, အခန်းကဏ္:: ငါတို့ Matthias သရုပ်ဆောင်အကြောင်းကိုသိသမျှ
အရိပ်နှင့်အရိုး (L မှ R သို့) CALAHAN SKOGMAN သည် MATTHIAS HELVAR အရိပ်နှင့်အရိုး Cr တို့တွင်ဖြစ်သည်။ 2021 © NETFLIX ၏တရားရုံး
အဘယ်သူမျှမရာသီ3Master မေလ 2021 ခုနှစ်တွင် Netflix သို့လာမယ့်နေသည် မချရသေးသည့်ရက်စွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေ - Live-action ရုပ်ရှင်ရှိသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
Calahan Skogman အသက်
ဒီအမေရိကန်သရုပ်ဆောင်ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မေလ ၁၃ ရက်နေ့မှာသူ့ကို ၂၇ နှစ်အရွယ် Taurus အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့တယ်။ နောက်လတွင်သူသည် ၂၈ နှစ်ပြည့်လိမ့်မည် အရိပ်နှင့်အရိုး , Skogman အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကြီးပြင်းခြင်းနှင့် ကောလိပ်တက်ခဲ့သည် တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ။
Calahan Skogman Instagram ကို
Calahan Skogman (@ calahan.skogman) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
လက်ရှိတွင် Calahan Skogman ၌ Instagram ပေါ်တွင်နောက်လိုက် ၃၈၀၀၀ ရှိပြီး၊ ငါခန့်မှန်းနေသောအရေအတွက်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တက်လိမ့်မည် အရိပ်နှင့်အရိုး တရားဝင်သောကြာနေ့တွင် Netflix ကိုတရားဝင် မင်းသားကသူ၏စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုပြီးပြပွဲမှကြော်ငြာများ၊ သူကိုယ်တိုင်ဓါတ်ပုံများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေရန်ပြုလုပ်သည်။
Skogman သည်သူနှင့်အတူဓာတ်ပုံများစွာမျှဝေခဲ့သည် အရိပ်နှင့်အရိုး Co- ကြယ်, ဒန်ယဲလ် Galligan ။ ကျနော်တို့မြင်ရတာကိုသဘောကျတယ်။ သင်သူ၏ Instagram စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှု။ လိုက်နာလိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ link ကိုလိုက်နာပါ ။
Calahan Skogman အမြင့်
အရ မိမိအစာရင်းဇယား ကျောင်းမှဘတ်စကက်ဘောကစားသမားအဖြစ်သူ၏လက်ထက်မှစ။ ကာလဟမ် Skogman သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသော ၆'၄ ၌ရပ်နေသည်။
Calahan Skogman အခန်းကဏ္။
အတွက် Matthias Helvar ၏အစိတ်အပိုင်းကိုဆင်းသက်မတိုင်မီက အရိပ်နှင့်အရိုး Skogman သည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားတွင်သာပါဝင်သည် အသွေးရုပ်သေး! ခရစ်စမတ် '94 နှင့်အနည်းငယ်ဘောင်းဘီတို။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, လာမည့် Netflix ကပြပွဲသရုပ်ဆောင်ရဲ့ breakout အခန်းကဏ္markကိုမှတ်မိစေခြင်းငှါ, ငါတို့ Skogman ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒီကနေဘယ်မှာကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်!
နောက်တစ်ခု:Shadow and Bone ရာသီ2အတွက်သက်တမ်းတိုးပါသလား။
Calahan Skogman ကို Matthias အဖြစ်ဘယ်တော့မှမကြည့်ပါနှင့် အရိပ်နှင့်အရိုး Aprilပြီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာပြမယ်
netflix အပေါ်အစေးစုံလင်သော2ဖြစ်ပါတယ်
အပြာရောင်သွေး netflix ရာသီ 9
supergirl ၏ရာသီ4Netflix အပေါ်ထွက်လာမယ့်အခါ
အားလုံး7သေစေနိုင်သောအပြစ်များကို anime